Başkentray, nke na-eje ozi na Ankara, na-agbagha banyere nsogbu banyere kaadị njem anaghị akwụ ụgwọ. Başkentray, nke etinyere na Eprel, na-aga n'ihu na-akpata ọgba aghara n'ihe banyere kaadị njem njem n'efu. Ndi mkpoko nke Ankara Obodo [More ...]
Obodo Ankara mepere emepe nke Gọọmentị GO dị Iche Iche na Nchekasị Nchekasị nyere ndị ọrụ EGO General Directorate Rail Systems Ngalaba n'ime ọrụ ọzụzụ ụlọ. Ahụike na nchekwa ọrụ aka na mkpọtụ nke Ankara Metropolitan Munista Mayor Mansur Yavaş [More ...]
Obodo Kayseri bidoro na-achọ ọrụ na oge ọkọchị wee na-aga n’ihu. Ejiri okwute kpuchie elu obodo ahụ bụ nke na-eme ka ịdị mma na nkasi obi dị mma. Onye isi obodo nke Obodo ukwu Memduh Büyükkılıç, oge ọkọchị na obodo [More ...]
TCDD Transportation General Manager Erol Arikan na TCDD General Director Ali Ihsan kwesịrị ekwesị bubata dị iche iche ụdịdị n'etiti Kazakhstan na Turkey / mbupụ butekwara Kazakhstan Railways maka mmezu nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè zutere na Astana na izugbe manager na management. deal [More ...]
Mgbe ọ na-ekwu okwu na mmemme Pulse nke Eskişehir, Eskişehir Chamber of Commerce (ETO) Onye isi oche Metin Güler kwuru, sị: “Aha Eskişehir dị n'usoro ọ bụla na-aga nke ọma. Contemporary, obodo ọhụụ na nghọta. O nwere akụrụngwa dị iche iche. N’ọdịnihu, Eskişehir [More ...]
Eid al-Adha eziga nnukwu ozi njem njem site na Republic of Turkey State Railways (TCDD), ekweghị ka iga nke elu-ọsọ ụgbọ oloko na anụ na ihe onwunwe àjà. Dabere na akụkọ Serkan Alan na Akwụkwọ akụkọ; Yolcu Ọtụtụ ndị njem n'ihi Eid al-Adha [More ...]
Oge ihe nrịba ọsọ nke tiketi njem nke 2019 dị ugbu a na njem: ụgbọ oloko na-agba ọsọ nke na-eme ka ndụ anyị dị mfe na njem ụgbọ elu na-aga n'ihu na-ejikọ obodo, ndị njem na ọdịbendị dị iche iche. Njirimara njem dị iche iche na ụgbọ ala [More ...]
Obodo Ankara Metropolitan, ụgbọ ala ọha na-eji ụgbọ ala eji eme ihe efu ma ọ bụ nke na-akwụghị ụgwọ ejiri Ankarakart'nın 2020 afọ kpebiri ụgwọ ndị visa Ankara Metropolitan Mayor Mansur Yavaş bụ ndị isi nzukọ nke ndị isi obodo Metropolitan na August [More ...]
TCDD Transport na Iran Railways Trans-Asia egosi nkwekọrịta e ruru na mgbe Transport na Infrastructure Barka Turhan, "mmepe nke oké onyinye nke Iran na njem iga na Turkey Trans-Asia Express, mgbe ogologo ezumike ọzọ Ankara-Tehran [More ...]
Anyị na-ahụta ezumike mba ọzọ ebe ndị na-eweta ndozi na-eme udo, iwe na-abịa na njedebe ma ndị mmadụ abịakwute ndị ha hụrụ n'anya. Na emume a, Mubarak ji Edin al-Adha ji obi anyị niile, udo, udo na ọganiihu nye obodo anyị, mba anyị, ụwa Alakụba na mmadụ niile. [More ...]
Na Sivas, Yozgat, Ankara YHT akara nke na-arụ ọrụ na-enyocha ndị Vice President Fuat Oktay, "Turkey na eve nke a ọhụrụ ịzụ, ịzụ elu na otu State Railways na-aga n'ihu na otu ọsọ. Enwere m obi ụtọ dị ukwuu n'ọrụ ahụ. Obi m uto nke ukwuu n'ihe m hụrụ [More ...]
Onye isi obodo nke Obodo Kayseri Memduh Büyükkılıç mere nyocha n'okporo ụzọ nchịkọta nke abụọ nke obodo ahụ, nke ewuru n'ogologo kilomita nke 11, nke malitere na Talas ma gaa n'ihu na Hulusi Akar Boulevard ruo Baghdad Street. Onye isi ala Büyükkılıç, ọdịnihu obodo 50 [More ...]
Eurostat, ụlọ ọrụ ọnụ ọgụgụ gọọmentị nke European Union, nke e bipụtara na 2017 ma bụrụ nke emelitere na Eprel, 2019 bụ okporo ụzọ kachasị ogologo na Europe nke nwere narị kilomita 15 523 na Spain. Germany na France sochiri Spain. Na otu nnyocha na Turkey [More ...]
N'afọ 1300, ọkà mmụta okpukpe Alakụba Ibn Khaldun kwuru na mwepu nke ịdị n'otu n'etiti ọha mmadụ bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa nke kwadebere mbibi nke ọha ahụ. Ọ ga-amasị m igosipụta obi ụtọ na ezumike okpukpe anyị ebe a na-eme ka mmetụta nke ịdị n'otu na nke anyị dị n'otu, [More ...]
Ulo oru, TCDD Transportation Inc. A nabatara arịrịọ maka mgbazinye ụgbọ ala na Touristic East Express nke 21 nke arụ ọrụ na-anabata n'etiti May-14 June 2019. Agencylọ ọrụ ụlọ ọrụ 180, TCDD Transportation Inc. choro dika ihe ruru puku egbe nke 7 [More ...]
Ndị azụmaahịa, ọkachasị mgbe ha na-eme njem site na Ankara gaa Istanbul, ụzọ si n'ụgbọ elu, ụgbọ oloko dị elu (YHT) malitere ịgbanwe. CDgbọ njem TCDD anọwo na-esiri ya ike ịkwụsi ike na tiketi na-esite na okirikiri azụmaahịa na ọnụ ụlọ ọrụ na-abawanye ụba. Companylọ ọrụ gụnyere ndị [More ...]